Persepolis FC - Wikipedia
Persepolis FC (Persepolis Fútbol Club), (Faarisi: باشگاه فوتبال پرسپولیس) waa koox isboorti oo ku yaalo Tehran, ee dalka Iiraan. Persepolis F.C. waxaa la aasaasay sanadkii 1963-kii Cali Abdo oo ahaa qeybtii ugu horeysay ee kubadda cagta Iran tan iyo 1968-dii. Persepolis waxa kale oo ay heysteen saddex kooxood oo kubada cagta, kubbadda kolayga iyo kubadda laliska ah sanadihii ugu horreeyey ee dhismaha. Persepolis F.C. waa naadiga kubadda cagta ee kubada cagta ee Persepolis Athletic iyo Club Cultural. Naadiga waxaa iska leh Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga. Waxaa jiray isku dayo badan oo ay kooxda ku gaarsiin laheyd guul la'aan sababtoo ah deyn weyn oo ay kooxdu heysato.
Kooxda ayaa ku ciyaaray garoonkeeda Azadi Stadium, tan iyo 1973-dii. Waxay ku tartamayaan kulamada Derby Derby, kaasoo loo arko mid ka mid ah kuwa ugu weyn Asia,  oo ay la wadaagaan Esteghlal, oo ah cayaar si joogta ah u raacsan taageerayaasha kubadda cagta ee Iran . Sida laga soo xigtay Xiriirka Kubadda Cagta Asia, Persepolis waa kooxda ugu caansan kubada cagta Asia   
Persepolis ayaa ku guuleysatay koobkoodii ugu horeeyay ee horyaalka Iran, iyo sidoo kale 5 Hazfi Cups, hal Super Cup iyo 1990-91 Asian Cup Winners Cup. Ciyaartoy badan oo cajiib ah ayaa u ciyaaray kooxda, sida ciyaartoydii hore ee Bayern Munich Ali Karimi, Ali Daei, Vahid Hashemian iyo ciyaaryahankii hore ee Hamburger Mehdi Mahdavikia. Si kastaba ha ahaatee, Ali Parvin ayaa loo arkaa inuu yahay ciyaaryahankii ugu weynaa abid ee kooxda. Parvin ayaa 18 sano u ciyaaray kooxda tan iyo 1970-kii. Nambarka uu xiran yahay, todoba, ayaa ka fariistay kooxda.
↑ FIFA.com/Persepolis Iran
↑ Soccerway-Persepolis FC
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Persepolis_FC&oldid=191247"
Last edited on 4 Maarso 2019, at 10:39